Weerarkii xarunta CID oo lasoo afjaray iyo raggii weerarka soo qaaday oo dhintay (SAWIRO KALE) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Weerarkii xarunta CID oo lasoo afjaray iyo raggii weerarka soo qaaday oo dhintay (SAWIRO KALE)
Ciidamada amaanka ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo af-jaray weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta niman ka tirsan Xarakada Al-shabaab kusoo qaadeen xarunta ciidamada booliska CID-da ee magaaladda Muqdisho.
Nimanka xaruntaasi soo weeraray ayaa tiro ahaan lagu sheegay ilaa 7 nin, waxaana 4 ka mid ah nimankaasi ay ku geeriyoodeen labadii qarax ee lagu weeraray albaabka hore ee xarunta halka 3-dii kalena ay ciidanku toogteen.
Wasiirka Amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed oo saxaafadda kula hadlay goobta uu weerarka ka dhacay ayaa sheegay in weerarkaasi ismiidaaminta ahaa ay ku dhinteen 13-qof oo ay ku jiraan raggii weerarka soo qaaday.
Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in dadka ku dhintay ay kala ahaayeen 5 qof oo shacab ah, 1 askari oo ka tirsan ciidanka dowladda iyo 7 qof oo ahaa raggii soo weeraray xarunta.
“Ciidamada Ilaalada xarunta CID ayaa toogtay 3 ka mid ah raggii weerarka soo qaaday, 4 kalene waxay ku dhinteen labadii qarax, waxaa sidoo kale ku geeriyooday 1 askari iyo 6 qof oo shacab ahaa ee wadada marayay”Sidaas waxaa yiri wasiirka amniga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya C/risaaq Cumar Maxamed.
Warar kale oo madax banaan ayaa sheegaya in weerarka ay ku dhinteen labo sarkaal oo ka tirsanaa ciidamadda booliska soomaaliyeed, inkastoo wasaaradda amniga ay beenisay warkaas.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan maanta ka dhacay ayaa sheegtay Xarakada Al-shabaab, waxaana uu kusoo beegmaya xilli shan maalin kahor labo qarax oo ismiidaamin ahaa ay ka dhaceen agagaarka garoonka diyaaradaha iyo xarunta Xalane ee magaalada Muqdisho.